Ogaden News Agency (ONA) – 119 Xabsi oo kamida Jeelasha Ethiopia oo Hayada Xuququl Insaanka Ethiopia booqanayso
119 Xabsi oo kamida Jeelasha Ethiopia oo Hayada Xuququl Insaanka Ethiopia booqanayso
Posted by ONA Admin	/ September 18, 2012
Haayada Xuquuqul Insaanka Ethiopia ( Ethiopia Human Rights Commission) ayaa sheegtay inay baadhitaano ku sameyn doonto 119 Xabsi oo kamida xabsiyada Ethiopia. Tirada guud ee ku xidhan xabsiyadaas ayaan laheyn. Haayadan Ayaa sheegtay inay wareysiyo ka qaadi doonta maamulada Maxaabiista ka taliya iyo dadka ku xidhan intaba iyada oo weydiinaysa su’alo ay kamid yihiin qaab dhanaqanka loo hayo maxaabiista. U jeedada baadhitaankan ayaa ah in la oggaado in maxaabista xuquuqdooda la dhowro iyo inkale.
Hayadan ayaa waxaa lagu asaasay nidaamka dastuuriga Ethiopia xeerka 210/2000 oo la hirgaliyay sanadkii 2000. Haayada ayaa wax awooda ah ku laheyd Ethiopia. waxayna hal mar oo kaliya sameyeen daraasad midan lamid ah oo 5o xabsi oo ku yaala Ethiopia ay kor meer ku tageen.
Haayadaha Qaramada midobay iyo Human Rights Watch ayaa marar badan ka hadlay maxaabiista Ethiopia iyo qaabka loola dhaqmo. Humar Right Watch ayaa sheegtay warbixinteedi 2012 in Ethiopia ay ku yaalaan xabsiyo qarsoon oo laga warheyn halkaasna lagu ciqaabo dadka. Iyada oo dad ban aan laheyn geeri iyo nolol meel ay ku danbeeyeen.
Hayadan ayaa soo saartay warsaxafadeedkan ay ku sheegayso inay booqanayso maxaabiista Ethiopia kadib marki lasiidayay 10,000 oo maxaabiis ah oo ku xidhnaa jeelasha Ethiopia.
Waxaa aad loola yaabo noqotay in hal mar lasii daayo toban kun oo qof arrintaas oo ka dhigaysa tirada dadka ku xidhan Ethiopia malaayin. Hadiiba 10, kun hal mar irida laga qaaday.
Dadka Ethiopia ku xidhan ayaa u badan dad loo qabtay arrimo siyaasadeed.
Wariyaasha Ree Sweden John iyo Schibye ayaa sheegay in xabsiyada ay ku jireen dadka si aad u xun loola dhaqmo. Maalinki ugu danbeysya ee xabsiga kasoo baxaynay ayaa waxaa hortaayada isku tuuray nin nala xidhnaa. Ninkaas oo qeylo afka kala qaaday ayaa nagula dar daarmay in caalamka aan u sheegno xaalada xabsiyada Ethiopia. Ninkaas markii uu dhulka isku kaaya hor tuuray waxaa markiiba hareeraha ka galay ciidanki xabsiga ilaalinayay oo bud meel kasta kaga jajabiyay iyaga oo sii jiidanaya ayaa noogu war danbeysya ayay dhaheen.
Dad kamid ahaa maxaabiista Ethiopia ku xidhan oo ONA lasoo xidhiidhay ayaa noo xaqiijiyay markasta oo haayadaha Xuquuql insaanku soo booqdaan xabsiyada. in dhamaan dadka u xidhan siyaasada laga saaro xabsiga oo lagu arruuriyo Hogag dhulka hoostooda ka qodan.
Ninkan oo magaciisa door biday in laqariyo ayaa waxa uu nooga sheekeeyay muddo 10 sanno ku dhow oo uu xabsiga ku jiray Ethiopia isaga oo xabsiyo badan maray.
maalinki ugu danbeysay ee xabsiga aan kaso baxo waxay aheyd maalin ay nasoo booqatay Haayada laan qeyrta cas. Kadib markii gawaadhida laan qeyrta cas la arkay ayaa waxaa askarti nagu bilowday qoryaha dabadooda inay nala dhacaan oo ay nagu guraan dhulka hoostisa hogag nooga qodna oo lanagu qarin jiray.
Ilaahay qadartiisa qolyihii nagaraacayay ayaa mid kamid ah budkiisa ka xoognay oo si kadis ah hoggii ayuu kaga dhacay waxuuna ka wahsaday innuu budka kala so baxo hogga. kadibna Jiingado ayay korka nagaga dadeen camuud iyo dhagaxaana korkay ka saareen hoggii aan ku jirnay. Markaasa waxaan bilownay in budkii jiingada ku garaacno.
qeylada jiinagado ayay maqleen qoladi laanqeyrta cas markasay dhaheen meeshan ooda ka qaada. sidaas ayaa lanagu arkay waxaana lana siiyay shhaado laanqeyrta cas ay bixiso midaas ayaana sababtay inaan jeelka kasoo baxo.
Xubno kale oo jeelka iyana kasoo baxaya yaa noo sheegay in laga bilaabo sanadkii 2010 aan looba ogoleyn in Haayadaha xuquuql insaanku booqdaan xabsiyada iyada oo warqadaas aysan dadku helin. ee iskood la isaga soo daayo qofki alaah kasoo furto xabsiga. Kiikalena uu ku dhinto meeshaas ama uu ku waaro.
Jeelasha Ogadeniya kuyaala ayaa iyaga cidna loo ogoleyn oo lamid ahayn Xabsiyada kale ee Ethiopia.